MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE BOXSKY IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Boxsky iyo Sawiro
Feedhyahan / Siberia Husky ey isku dhafan oo isku dhafan
Winston the Boxer / Siberian Husky mix at 2 sano jir- `` Waa eey firfircoon iyo bood bood aad u sareeya. Waa aad ayey u adag tahay in lagu hayo deyr ama wax ku jira . '
Boxsky-ku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Feedhyahan iyo Siberia Husky . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Orso Bruno oo ah buluug-indha-indheeye Boxer / Siberian Husky oo 2 sano jir ah kuna jira kursiga fadhiga isagoo xiran maaliyaddiisa casaanka— 'Waxaan Orso ka qaatay 2 sano ka hor badbaadinta xaafaddayada Husky / Malamute.'
Winston the Boxer / Siberian Husky wuxuu isku daraa 2 sano jir isagoo xiran muraayadaha indhaha, oo leh cagihiisa kor u saaran miiska jikada.
Winston the Boxer / Siberian Husky wuxuu isku dhex jiraa 2 sano jir ilaa sariirta sariirta saaxiibkiis doggie.
Hun Feeryahan / Siberia Husky eey yar oo ah 7 toddobaad jir— 'Gabadhaan yar waxay ka timid nin Feedhyahan ah oo saafi ah iyo haweeney nadiif ah oo Husky ah.'
Titan the Boxsky mix markii uu jiray 2 sano— 'Titan waa Feeryahan / Sibiriyan Husky oo isku qas ah xanaaqa ugu fiican ee aan ku arkay mid ka mid ah eeyadaydii aan haystay sannado badan. Aad buu dib u dhigay oo sifiican buu u dhageystaa. Waxaan aaminsanahay inuu yahay canine isku dheelitiran . Wuxuu jiraa 2 sano iyo 66 rodol sawirkaan. Dhibaatooyin ayuu ku qabay calalinta iyo qodista markii uu weli eey ahaa laakiin dhibaatadaas kuma dhicin tan iyo markii uu ahaa qiyaastii 1.5. Wuxuu ku fiican yahay carruurta oo wuxuu ahaa bilowgii! '
Liiska eeyaha Feedh isku dhafka ah
king charles isbaanish bichon mix
sida weyn yeela muqisho chiweenie heli
jack russell terrier iyo chiwawa iskudhaf
american bully pitbull mix eey
frize bichon iyo boqorkii Charles cavalier spaniel
isku darka doberman iyo jarmalka